Google Web Stories: Torolalana azo ampiharina amin'ny fanomezana traikefa feno
Zoma, Martsa 25, 2022 Zoma, Martsa 25, 2022 Sabrina Sedicot
Amin'izao vanim-potoana izao, isika mpanjifa dia maniry ny handevona votoaty haingana araka izay azo atao ary tsara kokoa amin'ny ezaka kely. Izany no nahatonga an'i Google hampiditra ny dikan-ny votoaty fohy antsoina hoe Google Web Stories. Inona anefa no atao hoe tantara an-tranonkala Google ary ahoana no fandraisan'izy ireo anjara amin'ny traikefa manafintohina kokoa sy manokana? Maninona no mampiasa tantara an-tranonkala Google ary ahoana no ahafahanao mamorona ny anao manokana? Ity torolalana azo ampiharina ity dia hanampy anao hahatakatra bebe kokoa ny